सर्वोच्च अदालतबाट ‘श्रीयन्त्र’ झिकिएको छ। धार्मिक र तान्त्रिक महत्व रहेको ‘श्रीयन्त्र’ लाई सोमबार निकालिएको हो। प्रधान न्यायालय रानीपोखरीमा रहेका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले ‘श्रीयन्त्र’ राख्न लगाएका थिए। न्यायको प्रतीक मानिने ‘श्रीयन्त्र’ छोएमा कसैले अन्याय गरेमा भष्म हुनसक्ने धार्मिक विश्वास छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५०८:२९
कर्मचारीलाई घरपायक सुविधा दिने सरकारले नयाँ मापदण्ड
ओलीसमक्ष भण्डारीले बुझाए राजीनामा
को-कति नम्बरमा परे सरकारले सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रममा? यस्तो छ नयाँ परिवर्तन!
घटनाको यस्तो प्रकृतिले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या ‘योजनाबद्ध’ रूपमा भएको निष्कर्ष
विश्वकप क्रिकेट खेल्ने खुशी लिएर फर्कियो नेपाली टिम
पर्यटनमा ठगी, शक्ति केन्द्रमा जगजगी : व्यवसायका नाममा ठगी मच्चाएर अबौं सम्पत्ति कुम्ल्याउदै